Curved ikanam ngosipụta dị iche iche site na omenala square ada ụgbọelu, ha nwere ike zuru okè ona na nwụnye gburugburu ebe obibi na ọbụna kpamkpam ngwakọta n'ime nwụnye ndabere. Ha nwere ike chepụta na-na dị iche iche radian dị iche iche echichi ndabere, n'ụzọ zuru okè imeghari ka nke ...
Na nso nso a, Fujian osisi Linsen ọkụ, East n'ime Hongye, Morgan Electronics, Hai Le Electronics na ọtụtụ ụlọ ọrụ PCB ndị ọzọ na-ewepụta ọkwa ọkwa PCB, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% na-abawanye. Ná mmalite July, Shandong Jinbao, Kingboard, Mingkang, Weili steeti, Jin Anguo na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere bụ ...
Kedu ọrụ P5 dị n’èzí n’ihu mepere emepe na-arụ?
Igwe na-eduga n'èzí na-arụ ọrụ dị mkpa n'ahịa ahịa mgbidi a. Anyị ga-akwụ ụgwọ dị ukwuu n'ahịa a mgbe anyị natara ọtụtụ iwu panel dị n'èzí. Kedu ihe kpatara ị ga - eji nwee oghere dị n'ahịa ọ bụghị naanị n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na - eji ya kama kaadị mgbasa ozi ma ọ bụ LCD mana ...
EachinLED Stage Ikanam Display
1, EachinLED Stage LED Display description EachinLED ogbo ikanam ngosi abụwo ihe nkịtị mgbe a usoro nke oké oge: mahadum na-enwe nzukọ na meeting.It-eme ka ndị na-ege ntị na-ele ihe oriri mgbe anyị na-eji ogbo Ikanam ngosi maka ndabere. EachinLED Stage Ikanam Display 2, EachinLED Stag ...
EachinLED Stadium Ikanam Display
1. EachinLED stadium ikanam ngosi EachinLED ámá egwuregwu Ikanam ngosi, nke e mere dị ka ihe achọrọ nke egwuregwu egwuregwu, ọ nwere ike ịgbasa mgbasa ozi azụmahịa nke onye nkwado, oge dị ukwuu, ngwa ngwa ngwa ngwa, mmechi dị nso wdg ga-enyere ndị na-ege ntị aka. kporie egwuregwu ahụ ...
EachinLED okporo ụzọ LED na-egosipụta ngwọta
1. EachinLED traffic ikanam ngosi nkọwa Traffic Ikanam ngosi eji na-egwu ọrụ nke ekere uwa maka okporo ụzọ Ikanam ngosi, ọ na-adịkarị etinyere okporo ụzọ. Ọ na-mere nke Ikanam ngosi ihuenyo ahụ, mbanye usoro, akara usoro, nkwukọrịta akụrụngwa, ike usoro na ọnụ ụzọ etiti, ụlọ, wdg, na s ...